Xaqiijin: Farmaajo oo iidheh ka dhigtay Tahriibayaal laga soo celiyey Liibiya (3 dhinac oo iska kaashaday) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xaqiijin: Farmaajo oo iidheh ka dhigtay Tahriibayaal laga soo celiyey Liibiya (3 dhinac oo iska kaashaday) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa iidheh iyo olole doorasho uga dhigtay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo soo celinta 97 dhalinyarro Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Liibiya.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qortay: “Ka dib kulan uu bishii la soo dhaafay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kula qaatay dalka Turkiga Madaxweynaha Golaha Madaxtooyada Liibiya, waxaa uu Madaxweynuhu guddi u saaray sidii dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada Liibiya loo soo badbaadin lahaa, waxaana maanta dalka soo gaarey kooxdii ugu horreysey oo ka kooban 97 muwaadin”. Waxaa la baahiyey muuqaallada qaar ak mida dhalinyaradda oo u mahad celinaya Farmaajo, markii lo osheegay inuu dalka kusoo celiyay.
Midowga Yurub ayaa faahfaahin kale bixiyey qorshaha dhalinyarradan lagu keenay. “Hindisaha Wadajirka ah ee Ilaalinta iyo dib u soo celinta muhaajiriinta ee Midowga Yurub iyo IOM ayaa caawiyey 97 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka yimid dalka Liibiya oo ay ku jireen xabsiyo in ka badan 2 sano. Iyadoo loo marayo barnaamijka, waxay heli doonaan taageerada dib-u-dhexgalka bulshada”
Previous articleCunto-Kariye ka tirsanaa Alshabaab oo isu dhiibay Ciidamada Dowladda ee K/Galbeed
Next articleSomaliya oo bixin weyday Qaaraankii Q/Midoobay (Sidee loogu ogolaaday inay sii lahaato Codeynta..?)